Miyaynu u socon karnaa sannadka kulul? | Saadaasha Shabakadda
Casudi casals | | Isbedelka Cimilada
Waxaa jira noocyo badan oo kala duwan oo ah diiwaanno heerkulka kala duwan ah. In kasta oo ay dhammaantood muujinayaan isku mid, darajooyinka gobol, waxay ka imaan karaan aagag yar illaa gobollo waaweyn, ama muddo gaaban illaa waqti aad u dheer (celceliska heerkulka). Sannadkan mar kale wuxuu tilmaamayaa mid ka mid ah kuwa adduunka ugu kulul, xitaa waxaa laga yaabaa inuu noqdo sannadka ugu diirran ee Spain laga qabtay.
Laakiin waxbaa dhacaya sanadkan oo aan hore u dhicin, waana qaybta ugu naxdinta badan ee heer kulka adduunka. Dhacdada El Niño ma dhicin. Inta lagu jiro sannadaha El Niño, marka ay baddu sii deyso kuleyl badan jawiga, waxay u muuqdaan inay yihiin sannadihii ugu kululaa sidoo kale. Maaddaama 2017 aysan dhicin, uma badna in heer kulka adduunka uu celcelis ahaan ka sarreeyo kan 2016. Laakiin waxay ku kala duwan yihiin oo keliya 0 ºC.
Heerkulka Celceliska Caalamiga ah (jaantus ay bixiso NOAA)
Inta lagu jiro 8-da bilood ee sanadka ugu horeeya 2017, bil kasta iyo bilwalba waxay kujireen 4 bilood ee ugu kululaa tan iyo markii diiwaanada ladilay. Tani waxay keentay in 2017 ay yeelato heerkulka labaad ee ugu sareeya rikoor muddo 138 sano ah. Markan, iyada oo aan la helin ifafaalaha El Niño, way ka dhigeysaa, iyo illaa hadda, sannadka ugu diirran ee la diiwaan geliyo iyada oo aan ifafaaladan la helin. Maxaa dhici lahaa haddii El Niño isna dhici lahaa? Waxay u badan tahay, in rikoor cusub oo heer caalami ah la sameyn lahaa.
Sida aan ku arki karno garaafka, waxaan leenahay heerkulka Caalamiga, ee woqooyiga iyo koonfurta kororka. Midda isbeddelka ugu badan sameyneysaa waa Waqooyiga Caalamka.Haddii aan eegno celceliska heerkulka la diiwaangeliyey illaa 2000, waxaan arki karnaa inay jirto dib u soo kabasho u muuqata inay sii kordheyso oo aan la siinin. Intaas waxaa sii dheer, dardargelinta heerkulka sannadihii la soo dhaafay waa mid aan kala joogsi lahayn oo laga walwalo. Oo tixgelinaya taas Waxay ahayd sanadkii hirarka ugu kululeyn Spain Laga soo bilaabo 1975, sannadkan waddanka Iberia wuxuu ku wajahan yahay waxa ugu diirran tan iyo markii ay jiraan diiwaanno.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Miyaynu u socon karnaa sannadka kulul?
Waxaan u maleynayaa in mid ka mid ah dhibaatooyinka hadda jira uu yahay ninku inuu ilaaway inuu ku nool yahay adduun firfircoon oo aan xasilloonayn iyo in si dabiici ah iyo waqti ka dib isbeddello cimilo dabiici ah oo u oggolaanaya noolaha meeraha inay si tartiib tartiib ah ula qabsadaan isbedeladan Si kastaba ha noqotee , dhibaatadu waxay tahay in markii isbeddeladani noqdaan kuwo muhiim ah oo leh ficillo aan habboonayn oo ku saabsan maareynta dheelitirka dabiiciga ah, waxay sababaan in la soo gaabiyo ama la waayo dhammaadka noocyadan iyo kheyraadka dabiiciga ah. Markaa sida ku cad macluumaadka aan ku aqrinayno maqaalkan waxaan gelaynaa geedi socod dabiici ah oo heer kululaynta aduunka ah, waxaa macquul ah kadib inaan galno xiliga kala guurka ee isbadalkan dabiiciga ah.
Sida Looga Qabto Biyaha Ceebka iyo Qoyaanka Cimilada Qalalan